कसरी आफ्नो गृहनगरमा लेखिएका कथाहरू खोज्नुहोस्
तपाईंको गृहनगरमा कतिपय कथाहरू कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ?
by टोनी रोजर्स
त्यहाँ तपाईंको आफ्नै समुदायको बारेमा लेख्न धेरै ठिक छ
के तपाईं खबरदार कथाहरू खोज्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर थाहा छैन कहाँ सुरू गर्न सकिन्छ? यहाँ केहि ठाउँहरू छन् जुन तपाइँका गृहनगरमा सही लेख बारेमा लेख लेखहरूको लागि विचारहरू खडा गर्न सक्नुहुन्छ। एकपटक तपाईले तपाइँको लेख लेख्नुभएपछि, हेर्नुहोस् कि यदि तपाइँ यसलाई स्थानीय समुदायका पेपरमा प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईंको ब्लगमा राख्नुहोस्।
यदि तपाइँ स्थानीय अपराध हराउन चाहानुहुन्छ भने, आफ्नो स्थानीय प्रहरी परिचालक वा स्टेशन गृहमा जानुहोस् (यो पहिलो पटक कल गर्न राम्रो छ।) यदि तपाईं सानो शहरमा हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ भने पुलिस प्रमुख, जासूस र हराको पुलिस ।
कुनै पनि रोचक घटना वा अपराधका बारेमा हाललाई सोध्नुहोस्, उनीहरूले भर्खरै संभाला गरेका छन्, वा घटनाक्रमको दिन-दिन-दिनको सूचीमा लगाइएको लग हेर्न चाहन्छन्।
स्थानीय अदालतले कथाहरूको खजाना ट्रक हुन सक्छ। तपाईंको स्थानीय जिल्ला अदालत सामान्यतया हुनेछ जहाँ कम-गम्भीर अवस्थाहरू व्यवहार गरिएका छन् - ट्राफिक टिकटहरूबाट सबै अपराधहरू दुर्व्यवहार गर्ने - जब एक उच्च अदालतले भ्रष्टाचारको परीक्षण गर्नुपर्नेछ। कुन अवस्थामा कुनै पनि दिन सुनेको कारण हेर्नको लागि अदालत क्लर्कको कार्यालयको साथ जाँच्नुहोस्।
शहर परिषद, काउन्टी कमीशन, नगर बोर्ड वा गाँउ समिति - तपाईले जो कोहीलाई बोलाउनुहुन्छ, स्थानीय सरकार कुनै पत्रकार को लागि समृद्ध स्रोतहरु हुन सक्छ। तपाईंको स्थानीय शहर सरकारको लागि वेबसाइट खोजेर सुरू गर्नुहोस्। यसले सम्भवतः आगामी बैठकहरूको लागि समय र यहाँका एजेन्डाहरू सूचीबद्ध गर्नेछ। कुन मुद्दाहरू छलफल गरिँदैछन् हेर्नुहोस्, केहि पृष्ठभूमि अनुसन्धान गर्नुहोस्, त्यसपछि बैठकमा हेड, कलम र नोटबुकमा ।
स्कूल बोर्ड बैठकहरूले पनि उत्कृष्ट कथाहरू उत्पादन गर्न सक्छ। फेरि, विद्यालय जिल्लाहरू प्रायः वेबसाइटहरू छन् जुन स्कूल बोर्ड बैठक समय र एजेन्डाहरूको सूचीमा छन्। यस्ता साइटहरू शायद विद्यालय जानकारीका साथ सम्पर्क जानकारी सहितका सूचीहरू सूचीबद्ध हुनेछन्, जुन पूर्व-बैठक अनुसन्धान गर्न वा बैठक पछि साक्षात्कार गर्न उपयोगी हुन सक्छ।
हाई स्कूल खेल घटनाक्रम
इच्छुक खेलकुदकर्ताहरूले खेलकुदलाई कवर गर्नका लागि उनीहरूको स्थानीय हाई स्कूलहरूमा थप हेर्न आवश्यक छ। धेरै शीर्ष स्पोर्ट लेखकहरू - जसले एनएफएल, एनबीए, र एमकेबी कवर गरे - अरूले खेलकुदको बीचमा उनीहरूको सुरूवात हाइ हाईस्कूल फुटबल, बास्केटबल र बेसबल खेल पाउँथे। कार्यक्रमहरूको लागि आफ्नो उच्च विद्यालयको वेबसाइट जाँच गर्नुहोस्।
सामुदायिक केन्द्रहरू र स्थानीय पुस्तकालयहरू
यी जस्तै स्थानहरू अक्सर बुलेटिन बोर्डहरू छन् तपाईंको क्षेत्रको आगामी घटनाहरूको सूची। यस्ता सुविधाहरूले अक्सर व्याख्यानहरू जस्तै स्पिकर वा लेखकहरू वा सामुदायिक मंचहरू भ्रमण गर्न घटनाहरूको होस्ट गर्छ।
कला ग्यालरीहरू र प्रदर्शन कला कलाहरू
त्यहाँ तपाइँको स्थानीय ग्यालरीमा अप-अप-आर्ट कलाकार द्वारा नयाँ प्रदर्शनी छ? प्रदर्शनीको समीक्षा गर्नुहोस् वा कलाकार साक्षात्कार गर्नुहोस्। के सामुदायिक थियेटर समूह नयाँ खेल प्रदर्शन गर्दैछ? फेरि, एक समीक्षा लेख्नुहोस् वा अभिनेता वा निर्देशक साक्षात्कार।
कलेज र विश्वविद्यालयहरू सामान्य रूपमा व्याख्यान, कन्सर्टहरू, र फोरमहरूमा व्यापक रूपमा रेजिभ हुन्छ। त्यस्ता घटनाहरूको सूचीको लागि कलेजको वेबसाइट जाँच्नुहोस्।
व्यवसाय लेखक बन्न चाहानुहुन्छ? अर्थव्यवस्थाको अवस्थामा आफ्ना विचारहरूको लागि स्थानीय व्यापारीहरू साक्षात्कार गर्नुहोस्। के तिनीहरूका व्यवसायहरू व्यस्त छन् वा संघर्ष? के नयाँ पसलहरू तपाईंको स्थानीय मुख्य स्ट्रीटमा खोल्नु वा बन्द गर्ने हो?
तपाईंको समाचार कथाहरूको लागि ठूलो शीर्षकहरू लेख्ने गोप्य
निष्पक्ष सिद्धान्त के हो?
किन ब्लगरर्सहरूले व्यावसायिक पत्रकारहरूको कामलाई बदल्न सक्दैनन्
ठूलो रुझान कथाहरू उत्पादनका लागि सुझावहरू
एसोसिएटेड प्रेस शैलीको आधारभूत
पत्रकारिता शिक्षा भविष्यको बारेमा पुरानो विद्यालयको समस्याबाट शिक्षक
डिजिटल मीडिया युगमा समाचार पत्र कसरी लाभदायक रहन सक्छ?
पत्रकारहरूको सुरुवात गर्न, कसरी संरचना समाचार समाचार कथाहरूमा हेर्नुहोस्
यहाँ चेकबुक जर्नलिज्मबाट बच्न कसरी र किन रिपोर्ट रिपोर्टरहरू हो
पत्रकारहरू कति कति गर्छन्?
2011 को शीर्ष 10 समाचार कथाहरु
गुणवत्ता समाचार स्टोरी उत्पादनको लागि 10 महत्त्वपूर्ण कदमहरू
Las 10 प्रोफेसरहरु मा Estados Unidos en 2017 को
10 भाषामा आवाज प्रभावहरूको शीर्षक शीर्षकहरू
पुरानो स्मिराना (टर्की)
के जीवनले हाम्रो आकाशगंगामा कहीं रहिरहन्छ?
क्रिस्टल बढ्दो व्यञ्जनहरू
एक विन्डोज सिस्टम मा पर्ल स्थापित कसरि
क्विन्की जोन्स 20 सबै भन्दा ठूलो आर एन्ड बी एलबम
3 र4डिजिट वर्कसिटहरू रिमाईडरहरूमा
गणित चिंता कसरी गर्ने
शैक्षिक खारेजको लागि नमूना अपील पत्र
Suggestopedia - पाठ योजना
राजकुमारी जेलीफिश (सीरीज) समीक्षा
इरिदू (इराक): मेसोपोटेरिया र विश्वमा सबैभन्दा पुरानो शहर
साम्यवाद र समाजवाद को बीच मतभेद
पानीमा कसरी हिँड्ने (गैर-न्यूटनियन द्रव विज्ञान प्रयोग)
शूटिंग लक्ष्य सफेटिज पूल र बिलियर्ड्स मा
शीर्ष 10 एली गाउल्डिङ गीतहरू
विश्वविद्यालय डेटन प्रवेश
डेल्फीमा हैश टेबलहरूको लागि TDictionary प्रयोग गर्दै
आधारभूत प्यान्टबल उपकरण
यूएस इलेक्ट्रोल कलेज प्रणाली कसरी काम गर्दछ
नि: शुल्क एक अधिनियम नाटक वर्ग को लागि नाटक गर्दछ
यस क्लिभर एड्भोभ गेमसँग अभिनय अभिनय र प्रदर्शन सुधार
'रोमियो र जूलियट' मा मन्टुगे हाउस
होल्ड (के त्यो गोल्फ अवधि मतलब छ)
UC Riverside प्रवेश
कसरी फेंक गर्नुहोस् इन